Doorashada Golaha Shacabka ee Somaliland oo la billaabayo. | Warbaahinta Ayaamaha
Doorashada Golaha Shacabka ee Somaliland oo la billaabayo.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabaneyso doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ee Somaliland.
Rooble ayaa xusay in maanta ay si toos ah u bilaabaneyso diyaar garoowga qabashada doorashada Golaha Shacabka ee Somaliland, isla markaana todobaadka soo socda la qabanayo doorashada, taasina ay ku heshiiyeen Mahdi Guuleed iyo Senatar Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa Madaxda maamul Goboleedyada ka dalbaday inay si dhaqsi ah u bilaaban doorashooyinka Golaha Shacabka Baarlamaanka, kuna soo gaba-gabooban si nabad galyo ah oo aan dhibaato laheyn, uuna rajio wanaagsan ka muujiyay arrintaas.
“Cidna ma dooneyso in halkaan sii joogto oo aan aniga ugu horreeyo, habeen kasta waxaan Alle ka baryaa in si nabad ah howlaha doorashada noogu dhammaadan, cidna aysan is dhaawicin cidna aysan is dilin ayaan rabnaa in aan halkaan ka tegno” ayuu yiri Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlaayay Munaasabad xalay lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in Xukuumaddiisa ay bilaabeyso gurmad loo fidiyo Dadka ay abaaraha iyo biyo la’aanta ku saameysay degaano ka tirsan Gobolada dalka Soomaaliya.